Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa inay dib u eegaan codsigeyga?
Waxaan ujeedadoodu tahay inay dib u eegaan dhammaan codsiyada gudahood 24 hrs diiwaangelinta.
Waxaan noqon karaa affiliate ah xitaa haddii aanan haysan website aniga ii gaar ah?
Haa aad awoodid. Waxaan ku siin qalab kale oo aad isticmaali kartaa (shortcodes SMS, Xeerarka QR, Telefoonka Khadadka iwm) si kor loogu magac our. Si fudud u soo xiriir maamulayaasha affiliate si ay uga wada hadlaan fursadaha aad heli karto.
Sidee baan ku arki kartaa inta lay muteystay?
You can track your earnings by logging into your partners.globaligaming.com affiliate account. Halkan waxaad ka heli doontaa doorashada oo dhamaystiran of warar iyo tirakoobka si ay u falanqeeyaan qaab olole aad.
Intee in le'eg oo lacag aan ka heli karo?
Ma jiro xad in qadarka dakhliga waxaad samayn kartaa, waxaa oo dhan hoos timaado inta waqti iyo dadaal aad ku riday. Waxaan bixinaa kala duwan oo heer sare ah tartan rasmi ah oo dabacsan dhismeedka guddiga ay ka mid yihiin share dakhliga, CPA iyo heshiisyo hybrid. Waxaad dib u eegi kartaa faahfaahinta buuxda oo ku saabsan bogga Guddiga our.
Goorma ayaan lacag?
lacagta Affiliate waxaa sameyn doona 15-ka bisha kasta guddiyada aad kasbatay bishii hore.
Waa maxay hababka lacag bixinta aad ku bixisaan?
Waxaan hadda oo kaliya bixiyaan lacagaha by BACS (min £ 100), Paypal (min £ 200) iyo Bank Transfer (min £ 500). Waxaa jira looxaan yar ee doorasho kasta in loo baahan yahay in la gaadhay ka hor bixinta waxa lagu sii daayay.
Maxaa talo bixinta aan eegi doonaa sida?
tixraacyada Your bixinta eegi doonaa sida: Fanaanka Partners April 2016 LucksCas, Fanaanka Partners August 2016 CoinF, Fanaanka Partners December 2016 SlotF, Fanaanka Partners CoinF, Fanaanka Partners SlotF, Fanaanka Partners LucksCas
Waa maxay shirkadda ka dambeeya GlobaliGaming Partners?
GlobaliGaming Partners waxaa iska leh oo ku shaqeeya by Riix Suuqyada Ltd, ka diiwaan gashan England iyo Wales, Shirkadda lambarka diiwaangelinta 09067768. cinwaanka Our ka diiwaan gashan yahay Salisbury House, Station Rd, Cambridge CB1 2LA.
Waayo, waraaqaha fadlan fiiri faahfaahinta xiriirka.
Sidee ayaan ku heli xiriiri kula?
Haddii aad qabto wax su'aalo dheeraad ah ama si fudud rabto in mid ka mid ah tababarayaasha affiliate hadli ka dibna aad si fudud u booqan kartaa nala soo xiriir page faahfaahinta xiriirka noo.
Raadi badan oo ku saabsan Barnaamijka Affiliate our halkan